Tokyo waxay kor u qaaday xayiraadaha makhaayadda iyadoo kiisaska cusub ee COVID-19 ay sii qulqulayaan
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jaban ee Japan » Tokyo waxay kor u qaaday xayiraadaha makhaayadda iyadoo kiisaska cusub ee COVID-19 ay sii qulqulayaan
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kariska • dhaqanka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Wararka Jaban ee Japan • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Khamriga & Ruuxa
Tokyo waxay kor u qaadday xayiraadaha makhaayadda iyadoo kiisaska cusub ee COVID-19 ay hoos u dhacayaan.
Magaalada Tokyo, ku dhawaad ​​102,000 oo maqaayadood oo la caddeeyay inay haystaan ​​tallaabooyin ka hortag ah oo COVID-19 ah ayaan mar dambe loo hoggaansami doonin codsi ah in la joojiyo u adeegidda aalkolada illaa 8:00 fiidnimo waqtiga maxalliga ah.
Tirada kiisaska cusub ee la xaqiijiyey ee coronavirus ayaa si aad ah hoos ugu dhacay guud ahaan Japan.
Magaalada caasimadda ah ee Tokyo ayaa xaqiijisay kaliya 19 kiis oo cusub oo COVID-19 ah maalintii Axadda.
Xayiraadaha makhaayadaha ayaa laga qaaday Tokyo waxaana lagu hareereeyay maamullada markii ugu horreysay muddo 11 bilood ah.
Sida maalin walba la xaqiijiyo kiisaska COVID-19 ayaa si aad ah hoos ugu dhacay guud ahaan Japan Axaddii, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba iyo Osaka ayaa kor u qaaday xayiraadaha COVID-19 ee makhaayadaha maanta.
Xaddidaadda adeegidda khamriga iyo saacadaha hawlgalka ee maqaayadaha ku yaal caasimadda iyo Osaka ayaa la qaaday markii ugu horreysay muddo 11 bilood ah, ka dib markii ay hoos u sii socotey hoos -u -dhaca caabuqyada guud ahaan Japan.
Maalin kasta ayaa la xaqiijiyay COVID-19 kiis oo hoos ugu dhacay 236 guud ahaan dalka shalay, marka la barbar dhigo in ka badan 25,000 oo la soo sheegay badhtamihii Agoosto, intii lagu jiray mawjaddii shanaad ee caabuqyada.
Tokyo waxay xaqiijisay 19 cudur oo maalinle ah Axadii, waana kuwii ugu yaraa tan iyo bishii Juun 17 ee sanadkii hore.
Magaalada Tokyo, ku dhawaad ​​102,000 oo maqaayadood oo la caddeeyay inay haystaan ​​tallaabooyin ka hortag ah oo COVID-19 ah ayaan mar dambe loo hoggaansami doonin codsi ah in la joojiyo u adeegidda aalkolada illaa 8:00 fiidnimo waqtiga maxalliga ah. Si kastaba ha ahaatee, ilaa 18,000 oo xarumo cunto oo aan la aqoonsan ayaa u baahan doona inay sii wadaan raacitaanka xayiraadihii hore oo waa inay joojiyaan adeega 9:00 pm wakhtiga maxaliga ah.
Intaa waxaa dheer, dhammaan goobaha wax lagu cunteeyo waxaa laga codsan doonaa in lagu xaddido tirada kooxda ilaa afar qof miiskiiba, iyo kooxaha waaweyn, caddaynta tallaalka ayaa loo baahan doonaa.
Xukuumadda magaalada Tokyo ayaa sheegtay inay xoojin doonto tallaabooyinka ka-hortagga COVID-19 illaa dhammaadka Noofambar si kor loogu qaado soo kabashada dhaqdhaqaaqyada bulshada iyo dhaqaalaha iyada oo laga hortagayo dib u soo kabashada cudurrada.